Proverbe Akala-mitomoetra aho : raha mihohoka, any ny velona; fa raha mitsilany, any ny maty. [Cousins 1885 #30]
Akondrobe tra-panala: raha velona aza, mihohoka. [Cousins 1885 #77]
Tsy misy tondroina dia maty. [Veyrières 1913 #5516, Cousins 1885 #3547]
Katsaka an-tanimena : ny baby telo tsy misy, fa raha velona ny aina dia zara. [Veyrières 1913 #2500, Cousins 1885 #1236]
Faty ividianan-dambamena tsy antonona azy, mahavery ny velona. [Cousins 1885 #949]
Ilay nievina am-paty : sady tsy homba ny velona no tsy homba ny maty. [Rinara 1974 #1413, Cousins 1885]
Proverbe Izao isika izao maty iray fasana, velona iray trano. [Houlder 1895 #249, Cousins 1885 #1172]
Mahery tsy maody tsy mba ela velona. [Houlder 1895 #1150, Cousins 1885 #1419]
Proverbe Mangahazo anaty tenona: mitondra lefona an-kibo, miferin-aina andro aman-alina, velona fa manana aina. [Veyrières 1913 #2618, Cousins 1885 #1612]
Mitan-droa ohatra ny omby kambana : velona ambin-karena, maty ambin-kanina. [Cousins 1885, Rinara 1974]
Proverbe Ny maty aza te-ho maro. [Rinara 1974 #3132, Cousins 1885]
Ny maty handry toy ny vovoka, fa ny velon-kihinana tahaka ny olona. [Cousins 1885 #2340]
Proverbe Ny maty no resy, fa ny velona manao tondra-dro. [Houlder 1895 #2119, Veyrières 1913 #1680, Cousins 1885, Rinara 1974]
Ny maty no tsy alevina Alahady, ny velona no tandrovina. [Cousins 1885 #2343]
Ny tany vadibeny Zanahary: mihary ny velona, manotrona ny maty. [Cousins 1885]
Proverbe Ny teraka tsy ifanapahana, fa izay velona no rain' ny zaza. [Rinara 1974 #3295, Cousins 1885 #2502]
Ompan-ko faty vao ela velona. [Rinara 1974 #3447, Cousins 1885 #2574]
Voavahy an-dafin-drano : ompan-ko faty ka vao ela velona. [Veyrières 1913 #4229, Cousins 1885 #3717]
Proverbe Raha omby mianaka ratsy foana, tsy mahaleo ny hadivory tsara rano velona manandriana olona. [Veyrières 1913 #2237, Rinara 1974 #3644, Cousins 1885]
Proverbe Sitry va aho, ka ho velona ambony vato? [Cousins 1885 #2905]
Proverbe Soron' afon' ny ntaolo : ny maty akofoka, ny velona aroso. [Veyrières 1913 #339, Cousins 1885]
Vary manta jinjana: tsy manam-po izay ho faty, fa ny manao no mahery. [Houlder 1895 #1927, Cousins 1885 #3621]